हेर्नुहोस ०७८ भदौ १७ गते विहिबार राशिअनुसार तपाईंको भाग्य - साँचो खबर Online Khabar
आज: २०७८ कार्तिक ५, शुक्रबार
दुर्घटना भयो तर चालक र सहचालक भेटिएन्न , आखिर कस्को हो त सवारी र कसरी भयो दुर्घटना
डाँडाको वरपिपल चलचित्र हलमा रिलिज ,किन हलमा गएनन् त दर्शक ? यसका प्रमुख दुई कारण छन्
मुगु दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ३२ पुग्यो
दशैँ भत्ता फिर्ता गर्छु भन्ने सांसदले उल्टै थप भत्ता बुझे!
कतार विश्वकपमा थकाली खानाको माग’ , नेपाली खानपान विश्व बजारमा परिचित गराउन पाउने राम्रो मौका
यसो भन्छन सन्तान जन्माउने विषयमा राजेश हमाल
मान्छे ‘पासो’ लागेको डोरी करोडौंमा बेच्ने भन्दै सुनाकोठीमा एक महिलाको अनौंठो हत्या
मानिसले यी ४ कामलाई धेरै दिनसम्म लुकाउन सक्दैनन्
माधव नेपालको आफ्ना मन्त्रीलाई यस्तो निर्देशनः मदिरा त्याग्नुस्, अवैध सम्बन्धबारे सुन्न नपरोस्
अपहरणमा परेका १३ वर्षीय बालकको १० घण्टामा सकुशल उद्धार,यस्तो रहेछ अपहरण गर्नुको कारण
Search for: in All Categoriesसमाचारअन्तरवार्ताअर्थ खबरसम्पादकीय खबरखेलकुदसुचना प्रविधिबिचारकला/मनोरंजनमुख्य समाचारव्यक्तित्वदेश/परदेशसमाजस्थानीयअन्तर्राष्ट्रियधर्म संस्कृतिसाहित्यस्वास्थ्यप्रदेश नं. १प्रदेश नं. २बागमतीगण्डकीप्रदेश नं. ५कर्णालीसुदुर पश्चिमसाँचो टि.भी.बजारबैंकअटोरोजगारीकृषि तथा पशुपालनअपराधजीवनशैलीप्रबासएन.आर.एन.फोटो फिचररोचक खबरFlash Newsराजनीतियुवाका कुराबिचित्र संसारशिक्षासामाजिक संजालमौसमविकासदुर्घटनाcovid 19राशिफलtaxबल्तकारगृहपेजगृहपेज » समाचारतस्करघटनाबाढी पहिरोकबिता
१दुर्घटना भयो तर चालक र सहचालक भेटिएन्न , आखिर कस्को हो त सवारी र कसरी भयो दुर्घटना
२डाँडाको वरपिपल चलचित्र हलमा रिलिज ,किन हलमा गएनन् त दर्शक ? यसका प्रमुख दुई कारण छन्
३मुगु दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ३२ पुग्यो
४कतार विश्वकपमा थकाली खानाको माग’ , नेपाली खानपान विश्व बजारमा परिचित गराउन पाउने राम्रो मौका
५मान्छे ‘पासो’ लागेको डोरी करोडौंमा बेच्ने भन्दै सुनाकोठीमा एक महिलाको अनौंठो हत्या
६अपहरणमा परेका १३ वर्षीय बालकको १० घण्टामा सकुशल उद्धार,यस्तो रहेछ अपहरण गर्नुको कारण
७काठमाडौंमा तोकियो मासुको भाउ, कसको कति?
८कांग्रेसबाट मन्त्रीहरु को को त ?
हेर्नुहोस ०७८ भदौ १७ गते विहिबार राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
होमपेज / राशिफल
१३१ पटक पढिएको
२०७८ भाद्र १६, बुधबार (१ महिना अघि)
मेषः आजको दिन अति उत्तम रहेकाले अहिलेसम्मको ऋण, रोग तथा शत्रुलाई बिजय गर्दै अगाडि बढन् सकिनेछ । साथीभाई तथा ईष्टमित्रबाट सहयोग पाईने हुनाले व्यवसायमा लगानी बढाई आम्दानी गर्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । पढाई लेखाईमा मन जाने तथा थोरै समय दिँदा पनि नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । मामा तथा मावली पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
वृषः दिन उत्तम भएपनि पढाई लेखाईमा आफ्नै कारणले कमजोरि गरेको भान हुनेछ । व्यापारमा प्रशस्त समय दिएमात्र आम्दानी बढाउन सकिनेछ । भौतिक सम्पत्ति तथा उपहार प्राप्तीको योग रहेपनि टरेर जानेछ । तर पनि मिहेनत गर्दा ईज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सकिनेछ। सन्तान तथा आफन्तको सहयोग लिएर काम गर्नुहोला गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
मिथुनः एक सुखद समाचारबाट दिनको सुरुवात हुनेछ । घरजग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ । आमा तथा आफन्तसँग मनमुटाव सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । व्यापारमा लगानी गरीहाल्ने समय नरहेकोला केहि समय पर्खनु नै राम्रो हुनेछ । माया प्रेममा धो का तथा शंका बढ्नेछ । राजनीति तथा समाजसेवी हरुका लागी समय मध्ययम रहेको छ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
कर्कटः यहाँको आजको दिन शुभ रहेको छ । आँट शाहस तथा पराक्रममा वृद्धि भएर जाने हुनाले पुरुषार्थि काम गरेर नाम तथा दाम दुबै कमाउन सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । उद्योग तथा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानी बढाउन सकिनेछ । लेखन, कला तथा साहित्यको क्षेत्रमा कलम चलाउनेहरुका लागि समय फलदायी रहेको छ । प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
सिंहः साँझ पख आजको दिन शुभ भएको महसुस हुुनेछ । बोल्ने कुरामा ध्यान नजादा आलोचनाको शि का र होईनेछ । कार्यक्षेत्रका कुरा का ट्ने तथा खुट्टा ता न्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । खानपानमा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ । कुटुम्ब तथा आफन्तसँग घरायसी कुरामा राय बाजिनेछ । प्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ । गीत संगीतको क्षेत्रमा लाग्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा वृद्धि हुने तथा आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ।
कन्याः एक राम्रो खबरबाट दिनको सुरुवात हुनेछ । विशेष अवसरमा आकर्षक उपहार प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने नयाँ लगानिको अवसर आउनेछ । ईमान्दारिता र मेहनेतले आत्म विश्वासमा वृद्धि हुनेछ । अध्ययनमा भनेजस्तो प्रगति गर्न सकिने हुनाले ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ । प्रेममय वातावरणमा समय व्यातित गर्न पाउदा मन हर्षित हुनेछ । बिहानको समयमा यात्रा हुने योग रहेकोछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
तुलाः आजको दिन सुखद रहने छ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले नोकरी तथा कार्यक्षेत्रमा तपाईको प्रस्तुती गहन हुनेछ । व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा आर्थिक अवस्थामा सुदृढ हुनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ भने नतिजा आफैँतिर ल्याउन सकिनेछ । मध्यान्हबाट समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्यमा समस्या आई कामहरु प्रभावित हुनेछन् । तर पनि लामो दुरिको यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
वृश्चिकः बिहानै राम्रो समाचार सुनिनेछ। आम्दानीका बिभिन्न स्रोतहरु फेला पार्न सकिनेछ । सानो पुँजीबाट व्यापार शुरु गरी मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुले नयाँ ठाउँको भ्रमण गरी दिनलाई फलदायी बनाउँनेछन् । अध्ययनमा थोरै मिहेनतले राम्रो सफलता हात पार्न सकिनेछ । अग्रजहरुको धन तथा सम्पत्तिको प्रयोग मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
धनुः दिन अत्यन्तै राम्रो छ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ भने कार्यक्षेत्रमा तारिफ योग्य काम गरी लोकप्रियता कमाउन सकिनेछ । शिक्षामा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिने हुनाले प्रतिस्पर्धीहरु किनारा लाग्नेछन् । माया प्रेममा विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ । नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको अधिक सम्भावना रहेको छ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
मकरः कोरोनाको समयमा आफ्नो काममा अरुले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ध्यान दिनुहोला । जीवनशैली व्यस्त रहेपनि न्यून उपलब्धीमा चित्त बुझाउनु पर्ला । पढाई लेखाईमा ध्यान नजाँदा अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा धो का तथा अविश्वास बढ्नेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला आलोचना गर्नेहरु वा खुट्टा ता न्नेहरु हाबी हुनेछन् । कष्टकर धार्मिक यात्रा हुनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
कुम्भः बिहिबारको दिन शुभ रहने छ । ब्यापारमा लगानी गरेपनि तत्काल फाईदा हुनेछैन । आफ्नो काममा भन्दापनि अरुकै काममा समय व्यतित हुनेछ । महत्वकांक्षी योजनाहरु पूरा गर्न निकै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । आफन्त तथा घरपरिवारका सदस्यहरुसँग राय बाजिनेछ । माया प्रेममा धो का तथा विस्वास घात हुनेछ । बिहानको समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाईमा मन जानेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
मीनः दिन अत्यन्तै राम्रो छ । व्यापार भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले व्यवसायमा लगानी बढाई मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा राज्यको नजिक बसेर काम गर्नेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । अध्ययनमा मन जानेछ भने भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्निबीच मायाको डो रो क सि ने छ । कृतिमानी काम गरी नाम कमाउन सकिनेछ । यहाँको दिन शुभ रहोस्।
आज २० असोज २०७८, बुधबारको राशीफल हेर्नुहोस !
आजको राशिफल : वि.सं. २०७८ साल असोज १७ गते आइतबार,​ यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
यी ४ राशिका मानिस धेरै भाग्यशाली हुन्छन्
हेर्नुहोस भाद्र महिनाको २० गते आइतबार देखि २७ गते शनिबार सम्मको साप्ताहि राशिफल
आज मिति २०७८ भदौ १३ गते आइतवार तपाईको राशिफल ।
आज १२ गते शनिबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।